34 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Veza mahwendefa maviri ematombo akaita seekutanga,+ ndinyore pamahwendefa acho mashoko aiva pamahwendefa ekutanga,+ awakaputsa.+ 2 Gadzirira, nekuti mangwana mangwanani uchakwira muGomo reSinai, womira ipapo pamberi pangu, pamusoro pegomo racho.+ 3 Asi hapana munhu anofanira kukwira newe, uye hapana anofanira kuonekwa mugomo racho. Kunyange makwai nemombe hazvifaniri kufura pamberi pegomo iroro.”+ 4 Saka Mozisi akaveza mahwendefa maviri ematombo akaita seekutanga. Akafumomuka ndokukwira muGomo reSinai, sezvaakanga arayirwa naJehovha, uye akaenda akabata mahwendefa maviri ematombo. 5 Jehovha akabva adzika+ ari mugore, akamira naye ipapo, akazivisa zita raJehovha.+ 6 Jehovha akanga achipfuura nepamberi pake achizivisa kuti: “Jehovha, Jehovha, Mwari ane ngoni+ netsitsi,*+ anononoka kutsamwa+ uye azere nerudo rusingachinji,*+ nechokwadi,*+ 7 anoratidza rudo rusingachinji kuzviuru,+ anoregerera kukanganisa, kutadza uye chivi,+ asi haazombosiyi munhu ane mhosva asina kurangwa,+ anoranga vanakomana nevazukurukomana nemhaka yekukanganisa kwemadzibaba avo kusvikira kuchizvarwa chechitatu nechizvarwa chechina.”+ 8 Mozisi akabva akurumidza kupfugama, akadzikisa musoro wake. 9 Akabva ati: “Haiwa Jehovha, kana mandinzwira nyasha, ndapota, Jehovha, fambai muri pakati pedu,+ kunyange zvazvo tiri vanhu vakaoma musoro,*+ uye tiregerereiwo kukanganisa kwedu nechivi chedu,+ uye tioneiwo senhaka yenyu chaiyo.” 10 Iye akapindura kuti: “Ndava kuita sungano newe: Ndichaita zvinhu zvinoshamisa pamberi pevanhu vako vese, zvisati zvamboitwa panyika pese kana pakati pemarudzi ese,+ uye vanhu vese vaunogara pakati pavo vachaona basa raJehovha, nekuti ndiri kukuitirai zvinhu zvinoshamisa.+ 11 “Inzwa zvandiri kukurayira nhasi.+ Ndiri kudzinga vaAmori, vaKenani, vaHiti, vaPerizi, vaHivhi, nevaJebhusi pamberi pako.+ 12 Ngwarira kuti usaita sungano nevagari vemunyika yauri kuenda,+ nekuti zvinogona kuva musungo pakati penyu.+ 13 Asi munofanira kuputsa atari dzavo, moparadza shongwe dzavo dzinoyera, motema mapango avo anoyera.*+ 14 Usakotamira mumwe mwari,+ nekuti Jehovha anozivikanwa kuti anoda kuzvipira kwakazara.* Iye ndiMwari anoda kuzvipira kwakazara.+ 15 Ngwarira kuti usaita sungano nevagari vemunyika yacho, nekuti pavanoita unzenza navanamwari vavo, vopa zvibayiro kuna vanamwari vavo,+ mumwe munhu achakukoka wodya zvimwe zvinhu zvaanenge achibayira.+ 16 Iwe uchabva watorera vanakomana vako vamwe vanasikana vavo,+ uye vanasikana vavo vachaita unzenza navanamwari vavo, voita kuti vanakomana vako vaite unzenza navanamwari vavo.+ 17 “Usazvigadzirira vanamwari vesimbi.+ 18 “Unofanira kuchengeta Mutambo Wechingwa Chisina Mbiriso.+ Udye chingwa chisina mbiriso, sezvandakakurayira; ita izvi kwemazuva manomwe kana nguva yacho yasvika mumwedzi waAbhibhi,*+ nekuti wakabuda muIjipiti mumwedzi waAbhibhi. 19 “Dangwe rese rechirume* nderangu,+ kusanganisira zvipfuwo zvako zvese, ungava mukono wekutanga wemombe kana wegwai.+ 20 Kana ari mwana wedhongi anotanga kuberekwa, unofanira kumudzikinura negwai. Asi kana ukasamudzikinura, unofanira kutyora mutsipa wake. Unofanira kudzikinura matangwe ese evanakomana vako.+ Hapana anofanira kuuya pamberi pangu achingova maoko chete. 21 “Unofanira kushanda mazuva matanhatu, asi pazuva rechinomwe unofanira kuzorora.*+ Kunyange panguva yekurima neyekukohwa, unofanira kuzorora. 22 “Upemberere Mutambo Wemavhiki negorosi rinotanga kuibva raunokohwa, uye upemberere Mutambo Wekuunganidza,* pakupera kwegore.+ 23 “Vanhurume vako vese ngavauye pamberi paIshe wechokwadi, Jehovha, Mwari waIsraeri, katatu pagore.+ 24 Nekuti ndichadzinga marudzi pamberi pako,+ uye ndichakudza nharaunda yako, uye hapana munhu achachiva nyika yako paunenge uchienda kunoona chiso chaJehovha Mwari wako katatu pagore. 25 “Usapa ropa rechibayiro changu pamwe chete nechinhu chine mbiriso.+ Chibayiro chemutambo wePaseka hachifaniri kurara kusvikira mangwanani.+ 26 “Pazvibereko zvinotanga kuibva zvevhu rako, unofanira kuunza zvakanakisisa zvacho kuimba yaJehovha Mwari wako.+ “Usabika mbudzana nemukaka waamai vayo.”+ 27 Jehovha akatizve kuna Mozisi: “Unofanira kunyora mashoko aya,+ nekuti ndinoita sungano newe uye naIsraeri maererano nemashoko aya.”+ 28 Uye akaramba ari ikoko naJehovha kwemazuva 40 neusiku 40. Haana kudya zvekudya uye haana kunwa mvura.+ Uye akanyora* pamahwendefa mashoko esungano yacho, Mirayiro Gumi.*+ 29 Mozisi akabva aburuka muGomo reSinai, uye mahwendefa maviri eChipupuriro aiva muruoko rwake.+ Paakaburuka mugomo, Mozisi haana kuziva kuti ganda rechiso chake raipenya nekuti akanga ataura naMwari. 30 Aroni nevaIsraeri vese pavakaona Mozisi, vakaona kuti ganda rechiso chake raipenya, uye vakatya kuswedera pedyo naye.+ 31 Asi Mozisi akavashevedza, saka Aroni nemachinda ese eungano vakauya kwaari, Mozisi akataura navo. 32 Pashure paizvozvo, vaIsraeri vese vakaswedera pedyo naye, akavapa mirayiro yese yaakanga apiwa naJehovha muGomo reSinai.+ 33 Mozisi paaipedza kutaura navo, aizvifukidza chiso chake.+ 34 Asi Mozisi paaipinda omira pamberi paJehovha kuti ataure naye, aibvisa chaakanga akazvifukidza nacho kusvikira abuda.+ Aibva abuda onoudza vaIsraeri mirayiro yaainge apiwa.+ 35 VaIsraeri vaiona kuti ganda rechiso chaMozisi riri kupenya; Mozisi aibva azvifukidza chiso chake kusvikira apinda kuti anotaura naMwari.+
^ Kana kuti “azere nemutsa.”
^ Kana kuti “uye akatendeka.”
^ Kana kuti “haadi vanokwikwidzana naye.”
^ ChiHeb., “Dangwe rese rinovhura chibereko.”
^ Kana kuti “kuchengeta sabata.”
^ Apa panofanira kunge pari kurehwa Jehovha. Ona vhesi 1.
^ ChiHeb., “Mashoko Gumi.”